Amaro culus oo lagu soo rogay M/Dhuusamareeb ‘‘Shirar siyaasadeed laguma qaban karo Hoteelada” | HalQaran.com
Amaro culus oo lagu soo rogay M/Dhuusamareeb ‘‘Shirar siyaasadeed laguma qaban karo Hoteelada”
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Hay‘addaha ammaanka dowladda Federalka Soomaaliya ee ku sugan Magaalada Dhuusamareeb ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta shirarka Siyaasadeed ee lagu qabto Magaaladaasi.
Amaradan ayaa waxaa lagu faray Milkiilayaasha Hotelada Magaalada Dhuusamareeb in aanan Hoteeladooda lagu qaban karin Shir siyaasadeed aysan ogeyn laamaha ammaanka Dhuusamareeb.
Laamaha ammaanka ayaa u sheegay Milkiilayaasha Hotelada ciddii Hotelkooda lagu qabto shir aanan lagu soo wargelin laamaha ammaanka in tallaabo laga qaadi doono.
Amarkaan ayaa imaanaya, iyadoo Guddiga doorashada Galmudug ay soo saareen habraaca doorashada maamulkaasi oo si wayn looga hadal haayo deeganada Galmudug.
Sida muuqata hay‘addaha ammaanka ee Magaalada Dhuusamareeb ka hawlgala ayaa Magaaladaasi ka bilaabay caburin ay ku sameynayaan dadka aragti ahaan ka soo horjeeda Jadwalka doorashada Galmudug.
Maamulka Galmudug ayaa waxa ay ku jirtaa xaalad doorasho qalafsan oo aan la ogeyn sida ay ku dhici doonto.
Amaro lagu soo rogay Hoteelada
Shirar Siyaasadeed laguma qaban karo Dhuusamareeb